Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » Izindiza ezinhle kakhulu manje ku-A220-300
Airlines • zezindiza • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba • Ubuchwepheshe • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • I-USA Izindaba Ezintsha
IBreeze Airways, iyibhanoyi lendiza laseMelika elizinze eCottonwood Heights, e-Utah.
Inkampani yezindiza yasungulwa nguDavid Neeleman, owake wasungula uMorris Air, WestJet, JetBlue, no-Azul Linhas Aereas.
IBreeze Airways iveze okusha Isikweletu se-A220-300 ngenkathi iqinisekisa ukuthi ifinyelele esivumelwaneni sokuthenga ne-Airbus ukuthola ezinye izindiza ezingama-20.
Lo myalo owawungadalulwanga ngaphambili wama-20 uletha incwadi ephelele yoku-oda yeBreeze kuma-80 A220-300s, eyokuqala ezolethwa ku-Q4 2021.
Umsebenzi omusha wokupenda wendiza waqedwa esikhungweni se-Airbus eMobile, e-Alabama, esizoletha cishe i-A220 eyodwa ngenyanga eBreeze eminyakeni eyisithupha nengxenye elandelayo.
IBreeze Airways, inkampani yezindiza yesifunda e-US yathi ngale nkampani: “Siyiqembu labathanda ukundiza, ukungenisa izihambi nabathandi bezobuchwepheshe abakholelwa ukuthi ukuhamba ngendiza kuyilungelo nethuba elikhulu kunawo wonke emhlabeni. Futhi, sikholwa ukuthi kufanele kube yinto efinyeleleka futhi emnandi ngokweqiniso kuwo wonke umuntu. ”
“Sisonke, sidale IBreeze Airways ™ - ubuchwepheshe obusha bokuhlanganisa izindiza nomusa. IBreeze ihlinzeka ngosizo olungami phakathi kwemizila engalondoloziwe engaphesheya kwe-US ngamanani aphansi.
“Ngokubhuka okungenamthungo, kungekho shintsho noma imali yokukhansela nezimpawu zendiza ezenziwe ngezifiso ezilethwa ngohlelo lokusebenza olulula nolulula, iBreeze yenza kube lula ukuthenga nokundiza kalula. Siyakwamukela ku-Breeze, izindiza ze-Seriously Nice ™ nemali yokugibela. ”
Inkampani yezindiza ihlela ukuqala izindiza ngemikhumbi ye-Airbus engxenyeni yesibili ka-2022.
Amadolobha e-Breeze Air
Ukusebenza kahle kwe-A220 kuzosekela izinhloso zebhizinisi lendiza entsha ukunikela ngesipiliyoni esihle sokuhamba, ngemali ephansi nokuguquguquka okuphezulu. IBreeze kulindeleke ukuthi ihlinzeke ngosizo olungami phakathi kwemizila engalondoloziwe engaphesheya kwe-US ngemali yokugibela engabizi.
IBreeze iqale ukusebenza kwezindiza ngoMeyi 2021. Le A220 yokuqala iyindiza entsha yokuqala ezosetshenziswa yinkampani yezindiza.
I-A220 ukuphela kwenjongo yendiza eyenzelwe imakethe yezihlalo eyi-100-150 futhi ihlanganisa ukuqoqwa kwezindiza okubizwa ngokuthi yi-state-of-the-art aerodynamics, izinto eziseqophelweni eliphezulu kanye nezinjini ze-PW1500G zakamuva zePatt & Whitney ezilungiselelwe ama-turbofan. Ukuzuza kubuchwepheshe bamuva, i-A220 yindiza ethule kunazo zonke, ehlanzekile, futhi enomusa kakhulu esigabeni sayo.
Ifaka i-50% yomsindo owehlisiwe futhi kuze kufike ku-25% ukusha okuphansi kukaphethiloli esihlalweni ngasinye uma kuqhathaniswa nezindiza zesizukulwane esedlule, kanye nokukhishwa okungu-50% okuphansi kwe-NOx kunamazinga embonini, i-A220 iyindiza enkulu yokusebenza kwedolobha.
Sekulethwe ama-A170s angaphezu kwama-220 ko-opharetha abayishumi e-Asia, eNyakatho Melika, eYurophu nase-Afrika, okufakazela ukuguquguquka okukhulu kwelungu lomndeni lakamuva le-Airbus.